नेपाल VS भुटान : नेपालले विश्वलाई चकित बनायो, मात्र २० रनको खर्चमा ९ विकेट लियो ! « Janaboli
नेपाल VS भुटान : नेपालले विश्वलाई चकित बनायो, मात्र २० रनको खर्चमा ९ विकेट लियो !
काठमाडौ । मलेसियामा जारी आइसिसी विश्व टी–२० क्रिकेटअन्तर्गत एसिया छनोट समूह ‘बी’को चौथो खेलमा नेपाललाई भूटानसँगको खेलमा चमत्कारीक सफलता मिलेको छ । नेपालले विश्वलाई नै चकित बनाएको छ । मात्र २० रनको खर्चमा ९ विकेट हात पार्दै विश्वलाई नै चकित बनाएको हो ।
अन्र्तराष्ट्रिय खेलमा विरलै देखिने स्कोर हो यो । खेलमा ललित राजवंशीको बलिङमा शुन्य रनमा नै भूटानको २ विकेट लिन नेपाल सफल भएको छ । ललित राजवंशीको बलिङमा भुटानका कप्तान जे सिंगे शुन्य रनमा नै आउट भए । उनलाई बसन्त भण्डारीले क्याच आउट गरे ।